I'd like to mention you about the Canadian Center for International Justice (CCIJ) event in Toronto on Tuesday March 31. They’re showing the Reckoning (a film about the ICC "Battle for the International Criminal Court"). Would you please send it off to people you think may be interested in attending?
Time:7pm (doors open at 8:30 pm)
BY ရဲရင့်ငယ်(ကနေဒါ) ... 3/29/20100အကြံပြုခြင်း
29 March 2010 ဒိုင်ယာရီ
29 March2010 Yeyintnge Diary
“အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်၏ မတ်လ ၂၉ ရက်နေ့ အစည်းဝေးဆုံဖြတ်ချက်နှင့် ပတ်သက်သည် လူ့ဘောင်သစ်ဒီမိုကရက်တစ်ပါတီ၊ ဗဟိုဦးဆောင်ကော်မတီ သဘောထား ထုတ်ပြန်
http://ifile.it/cdwhjqm29 Mar DPNS Stm on NLD Decision
လက်ရှိ မြန်မာပြည်သူတွေရဲ့ဘ၀ဟာ န၀တ၊ နအဖ ခေါင်းဆောင်များ မိုက်မိုက်ကန်းကန်း တူးထားတဲ့ တွင်းနက်ကြီးထဲမှာ မလူးသာ မလွန့်သာ ယက်ကန်ယက်ကန် ကျရောက်နေရတဲ့ အခြေအနေပါ။ ဒီအခြေအနေမျိုးမှာ မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ နိုင်ငံရေး အနေအထားဟာလည်း စိုးရိမ်အမှတ်ကို ရောက်နေပါတယ်။
နအဖအနေနဲ့ ရွေးကောက်ပွဲကို ကျင်းပဖို့ လူသိရှင်ကြား အကြိမ်ကြိမ် ပြောဆိုခဲ့ပြီး ဖြစ်ပါတယ်။ အခုဆိုရင် ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ဥပဒေ၊ နိုင်ငံရေးပါတီများ မှတ်ပုံတင်ဥပဒေ၊ ပြည်သူ့လွှတ်တော်ရွေးကောက်ပွဲဥပဒေ၊ အမျိုးသားလွှတ်တော် ရွေးကောက်ပွဲဥပဒေနှင့် တိုင်းဒေသကြီးနှင့် ပြည်နယ်ရွေးကောက်ပွဲဆိုင်ရာ ဥပဒေများနှင့် နည်းဥပဒေများကို ထုတ်ပြန်ခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်။ ဒါ့အပြင် ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ကိုလည်း ဖွဲ့စည်းထားပြီးဖြစ်ပါတယ်။
ဒီလိုရွေးကောက်ပွဲဆိုင်ရာ ဥပဒေတွေထွက်လာတဲ့အခါမှာ အထူးသဖြင့် ကြိုတင်ထွက်ဆခဲ့သလို ၂၀၀၈ ဖွဲ့စည်းအုပ်ချုပ်ပုံ အခြေခံဥပဒေကို ထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်ရမယ်ဆိုတဲ့ အချက်ပါလာသလို လုံးဝမျှော်လင့်မထားခဲ့တဲ့ နိုင်ငံရေးပါတီတွေကို ချုပ်ကိုင်ဖို့၊ ကန့်သတ်ဖို့ ပါတီတွင်းရေးရာတွေကိုပါ ၀င်ရောက်စွက်ဖက်နိုင်တဲ့ ဥပဒေတွေပါ ပါလာတာကို တွေ့ရပါတယ်။ တနည်းအားဖြင့် ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ဟာ ရွေးကောက်ပွဲကို ကြီးကြပ်မယ့်အပြင် နိုင်ငံရေးပါတီများကိုပါ ကွပ်ကဲမယ်ဆိုတဲ့ အပိုဒ်တွေပါလာသလို အကျဉ်းကျနေတဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ဟာ နိုင်ငံရေးပါတီခေါင်းဆောင်ဖြစ်ခွင့်မရှိသလို ပါတီဝင်တောင် ဖြစ်ခွင့်မရှိဆိုတာမျိုး၊ ဒါ့အပြင် နိုင်ငံရေးပါတီများမှာ အကျဉ်းကျနေတဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်များရှိခဲ့ရင် ပါတီက ထုတ်ပယ်ပစ်ရမယ်၊ မထုတ်ပယ်ဘူးဆိုရင် ပါတီကိုပါ ဖျက်သိမ်းနိုင်တယ်ဆိုတဲ့ အပိုဒ်တွေကိုပါ တွေ့ရပါတယ်။ ဒါတွေကြည့်ခြင်းအားဖြင့် ဒီဥပဒေတွေဟာ မတရားတဲ့ ဥပဒေတွေ နိုင်ငံရေးပါတီတွေကို နည်းမျိုးစုံနဲ့ ချုပ်ကိုင်နိုင်ဖို့ ၀င်ရောက်စွက်ဖက်နိုင်ဖို့ တမင်ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ ရေးဆွဲထားတဲ့ ဥပဒေတွေ၊ နည်းဥပဒေတွေဖြစ်တယ်ဆိုတာ သိသာထင်ရှားပါတယ်။
ဒီလို ဥပဒေတွေ၊ နည်းဥပဒေတွေနဲ့ အကန့်အသတ်တွေ အတားအဆီးတွေအောက်မှာ နိုင်ငံရေးပါတီတရပ် ရပ်တည်ဖို့ ရှင်သန်ဖို့အတွက် မှတ်ပုံတင်မယ်ဆိုရင် နိုင်ငံရေးပါတီများဟာ ကော်မရှင်ရဲ့ နည်းမျိုးစုံနဲ့ ကွပ်ကဲထိန်းချုပ်မှုအောက်ကို ရောက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ တိုင်းပြည်ကို အုပ်ချုပ်မယ့် ပြည်သူတွေကို ဦးဆောင်မယ့် နိုင်ငံရေးပါတီတရပ်ဟာ ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ရဲ့ ထိန်းကွပ်မှုအောက်မှာ နိုင်ငံရေးလှုပ်ရှားမှုတွေ လုပ်ရမယ်ဆိုရင် ဒါက လုံးဝမဖြစ်သင့်ဘူးလို့ ထင်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် ကျနော်အမြင်ပြောရရင် တရားဝင်နိုင်ငံရေးပါတီများဟာ မူလက ချမှတ်ထားတဲ့ မိမိပါတီရဲ့မူ၊ မိမိပါတီရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်တွေကို အမိအရ ဆုပ်ကိုင်ပြီးတော့ ပါတီကို ဆက်လက်ရပ်တည်သွားသင့်တယ်လို့ ထင်ပါတယ်။
အထူးသဖြင့် အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ဟာ ၉၀ ရွေးကောက်ပွဲမှာ ပြည်သူတွေရဲ့ တခဲနက်ထောက်ခံမှုကို ရထားတဲ့ ပါတီဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် ၉၀ ရွေးကောက်ပွဲ အကောင်အထည်ဖော်ရေးမှာလည်း အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ရဲ့ မူဝါဒဖြစ်သလို မကြာသေးခင်က ပါတီဝင်အများစုနဲ့ ဆုံးဖြတ်ချမှတ်ထားတဲ့ ရွှေဂုံတိုင်ကြေညာချက်ဟာလည်း ပါတီရဲ့ အဓိက ကိုင်စွဲရမယ့် မူဝါဒတရပ်ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီမူဝါဒတွေကို အကြောင်းမဲ့ စွန့်ပြီးတော့ ပါတီရှင်သန်ရေးအတွက် မှတ်ပုံမတင်သင့်ဘူးလို့ ထင်မြင်ပါတယ်။ အထူးသဖြင့် အန်အယ်လ်ဒီဟာ စီအာပီပီအဖွဲ့ဝင် ပါတီတရပ်ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့် စီအာပီပီမှာ အများသဘောတူ ဆုံးဖြတ်ချမှတ်ထားတဲ့ စီအာပီပီရဲ့ မူတွေကိုလည်း မသိကျိုးကျွန်ပြုပြီး စွန့်ခွာသွေဖည်မသွားသင့်ဘူးလို့ ထင်ပါတယ်။
ဒီလို နအဖ ချမှတ်လိုက်တဲ့ ရွေးကောက်ပွဲဆိုင်ရာ ဥပဒေတွေကို အကြောင်းပြုပြီး အန်အယ်လ်ဒီအတွင်းမှာ ပါတီမှတ်ပုံတင်ရေး မတင်ရေး၊ ရွေးကောက်ပွဲဝင်ရေး မ၀င်ရေး စသည်ဖြင့် ပြင်းပြင်းထန်ထန် ငြင်းခုံဆွေးနွေးမှုတွေ ရှိသလို ပြည်သူ့အကျိုး တိုင်းပြည်အကျိုးထက် ပါတီရှင်သန်ရေးအတွက် ဦးစားပေးပြီး ပါတီမှတ်ပုံတင်ဖို့ ကြိုးပမ်းအားထုတ်နေတဲ့ လူတချို့ရှိနေတယ်ဆိုတာလည်း ကြားသိရတဲ့အတွက် အလွန်မှစိတ်မကောင်းဖြစ်ပြီး ပါတီရဲ့ အနာဂတ်အတွက်ရော တိုင်းပြည်အတွက်ပါ စိုးရိမ်ပူပန်စိတ်တွေဖြစ်ရပါတယ်။ အကယ်၍ အန်အယ်လ်ဒီဟာ (၂၉၊ ၃၀) ရက်မှာ ကျင်းပတဲ့ အစည်းအဝေးက ပါတီမှတ်ပုံတင်မယ်လို့ ဆုံးဖြတ်ခဲ့ရင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို ထုတ်ပယ်ရမှာ ဖြစ်သလိုပဲ အဲသလို ထုတ်ပယ်မှုကို မလိုလားတဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်များအနေနဲ့ ပါတီက ခွဲထွက်သွားနိုင်တယ်။ အကယ်၍ ပါတီကို မှတ်ပုံမတင်ဘူးလို့ ဆုံးဖြတ်ခဲ့ရင်လည်း ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ် ပါတီမှတ်ပုံတင်မယ်ဆိုတဲ့ လူတချို့က ပါတီက ခွဲထွက်ပြီး သီးခြားပါတီထောင်မယ့် အရိပ်လက္ခဏာတွေကိုလည်း တွေ့မြင်ရပါတယ်။ ဒါတွေဟာ ပါတီအတွက်သာမကပဲ တိုင်းပြည်အတွက်ပါ စိုးရိမ်စရာဖြစ်ပါတယ်။ နောက်တချက်က အကယ်၍ ပါတီမှတ်ပုံမတင်ခဲ့ဘူးဆိုရင် နအဖရဲ့ ရွေးကောက်ပွဲဆိုင်ရာ ဥပဒေတွေအရ ပါတီကို တရားမ၀င်ပါတီအဖြစ် ကြေညာနိုင်တဲ့ အနေအထားမှာလည်း ရှိပါတယ်။
ဒီလိုသာကြေညာခဲ့မယ်ဆိုရင် မြန်မာနိုင်ငံတနိုင်ငံလုံးကို လွှမ်းခြုံဖွဲ့စည်းထားတဲ့ ပါတီ၊ နိုဘယ်လ်ငြိမ်းချမ်းရေးဆုပိုင်ရှင် တိုင်းရင်းသားပြည်သူတရပ်လုံး လေးစားကြည်ညို ချစ်ခင်မှုရှိတဲ့ နိုင်ငံတကာကလည်း အသိအမှတ်ပြုလေးစားတဲ့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ဦးဆောင်တဲ့ပါတီ၊ ၁၉၉၀ ရွေးကောက်ပွဲမှာ ပြည်သူတွေရဲ့ တခဲနက်မဲဆန္ဒနဲ့ အပြတ်အသတ် အနိုင်ရထားတဲ့ ပါတီတရပ်ကို နအဖ ခေါင်းဆောင်များအနေနဲ့ ထင်တိုင်းကျဲပြီး ကြေညာချက်ထုတ်လိုက်ရုံနဲ့ ပျက်ပြယ်သွားမှာလား။ ပါတီဝင်များနဲ့ ပြည်သူကရော ဒီအတိုင်းငုတ်တုတ်ခံမှာလား။
ကျနော့်အထင်ကတော့ နအဖအနေနဲ့ ဒီလိုရမ်းရမ်းကားကား ပြုလုပ်ခဲ့မယ်ဆိုရင် ယခင်က နအဖ ပြုသမျှ အကြိမ်ကြိမ်နုခဲ့ကြတဲ့ ပါတီဝင်တွေနဲ့ ပြည်သူတွေဟာ ဒီတကြိမ်မှာတော့ တနည်းနည်းနှင့် တုံ့ပြန်ကြလိမ့်မယ်လို့ ထင်မြင်ယူဆရပါတယ်။ ဒီနေရာမှာ အချို့ခေါင်းဆောင်များ၊ လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များနဲ့ ပါတီဝင်တွေက အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ကို နအဖက ဘယ်လိုပဲဖျက်ဖျက်၊ ဘယ်လိုပဲကြေညာကြေညာ အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ဟာ ၉၀ ရွေးကောက်ပွဲမှာ ပြည်သူတွေက တခဲနက်လုပ်ပိုင်ခွင့်ပေးထားတဲ့ ပါတီဖြစ်တယ်။ ဒါ့ကြောင့် ဒီလို အခြေအနေမျိုးကို မလွဲမရှောင်သာ ကြုံတွေ့လာမယ်ဆိုရင် ၉၀ ရွေးကောက်ပွဲရလဒ်နဲ့ ပါတီရဲ့အလံကို ငွားငွားစွင့်စွင့် စွဲကိုင်ပြီး ဒီမိုကရေစီရေး လူ့အခွင့်အရေး အာဏာရှင်စနစ်ဆန့်ကျင်ရေး အတွက် ဆက်လက်တိုက်ပွဲဝင်ကြမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ တချို့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များနဲ့ အဖွဲ့ဝင်များကတော့ ပြည်ပကိုထွက်ပြီး အဝေးရောက် အဖွဲ့ချုပ်ဝင်များနှင့်ပူးပေါင်းကာ ကျရာကြုံရာအခန်းက ဆက်လက်ကြိုးပမ်းကြမှာဖြစ်ပါတယ်။ အဖွဲ့ဝင်အများစုကတော့ ကိုယ်ယောင်ဖျောက်ပြီး လျှို့ဝှက်နည်းလမ်းတွေနဲ့ အာဏာရှင်စနစ်ဆန့်ကျင်ရေး၊ ဒီမိုကရေစီရေး၊ လူ့အခွင့်အရေးတွေအတွက် နည်းလမ်းပေါင်းစုံသုံးပြီးတော့ ဆက်လက်တိုက်ပွဲဝင်ကြမှာဖြစ်ပါတယ်။
ဒီလိုသာဆိုရင် မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ပြဿနာတွေ၊ ပဋိပက္ခတွေဟာ ပိုမိုပြင်းထန်လာမှာဖြစ်ပါတယ်။ ဒီလို ပါတီ ဖျက်သိမ်းခံရမယ်။ ရွေးကောက်ပွဲမှာလည်း ပါဝင်ခွင့်မရဘူးဆိုရင် အမေရိကန်နဲ့ ဥရောပနိုင်ငံများ အပါအ၀င် နိုင်ငံတကာ အသိုင်းအ၀ိုင်း အနေနဲ့လည်း နအဖက ကျင်းပမယ့် ရွေးကောက်ပွဲကို အသိအမှတ်ပြုမှာမဟုတ်သလို ရွေးကောက်ပွဲက ပေါ်ထွက်လာမယ့် ရလဒ်တွေကိုလည်း အသိအမှတ်ပြုမှာ မဟုတ်ပါဘူး။ ဒါ့အပြင် နအဖအစိုးရကို စီးပွားရေးပိတ်ဆို့မှု အပါအ၀င် အထွေထွေသော ဖိအားတွေကို ပိုမိုပြင်းထန်စွာ ချမှတ်ကျင့်သုံးလာမှာဖြစ်ပါတယ်။ ဒီလိုသာဆိုရင် စီးပွားရေး၊ လူမှုရေးအစစ ယိုယွင်းကျဆင်းမှုဒဏ်ကို ခါးကော့အောင် ခံနေကြရတဲ့ ပြည်သူများအနေနဲ့ ပိုမိုဆိုးရွားကျပ်တည်းတဲ့ အခြေအနေတွေကို ရင်ဆိုင်ကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။
ဒီလိုဒုက္ခတွေအတွက် နအဖ အာဏာပိုင်များကို ပြည်သူတွေရဲ့ဒုက္ခကို စာနာပါ၊ တိုင်းပြည်မျက်နှာကို ထောက်ထားပါလို့ စာရေးသူအနေနဲ့ကတော့ ပြောကြားလိုတဲ့ ဆန္ဒမရှိပါဘူး။ ဘာကြောင့်လဲဆိုရင် နအဖ ခေါင်းဆောင်တွေဟာ ပြည်သူတွေရဲ့ ဒုက္ခတွေကို၊ တိုင်းပြည်ရဲ့မျက်နှာကို ထောက်ထားညှာတာခဲ့တာ နအဖ သက်တမ်း တလျှောက်မှာ တကြိမ်တခါ တစိုးတစိမျှ ပြသခဲ့တာ မရှိပါဘူး။ အထူးသဖြင့် မြန်မာနိုင်ငံပြည်သူတွေဟာ နာဂစ်မုန်တိုင်းဒဏ်ခံရလို့ အကြီးအကျယ် သေကြေပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုတွေ ကြုံနေရချိန်မှာတောင် နအဖ ခေါင်းဆောင်များအနေနဲ့ စာနာထောက်ထားမှု၊ ငဲ့ညှာသနားမှုကို မပြခဲ့သလို သူတပါးရဲ့ တိုင်းတပါးရဲ့ စာနာထောက်ထားမှုနဲ့ ပေးအပ်လာတဲ့ အကူအညီများကိုတောင် ပိတ်ပင်တားဆီးခဲ့တာ သာဓကပါပဲ။
ဒါပေမယ့် နအဖ ခေါင်းဆောင်များကို ပြောကြားလိုတာက အခုလက်ရှိအခြေအနေမှာ နာမည်ဆိုးနဲ့ ကျော်ကြားနေမယ့်အပြင် သေလွန်သွားပြီးတဲ့နောက်မှာလည်း သမိုင်းနောက်ကြောင်းမလှဘဲ သမိုင်းတရားခံများ ဖြစ်ကြမယ့်အရေး တွေးတောစဉ်းစားဖို့ လိုလိမ့်မယ်လို့ ပြောကြားလိုပါတယ်။ အထူးသဖြင့် ဗိုလ်နေ၀င်း၊ ဗိုလ်စောမောင်၊ ဗိုလ်ခင်ညွန့်တို့ရဲ့ ဘ၀နိဂုံးကို သံဝေဂယူပြီး ပြောင်းလဲပြုပြင်ဖို့ အချိန်မနှောင်းသေးပါဘူးလို့တော့ ပြောကြားလိုပါတယ်။
အခြားတဖက်မှာလည်း တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းများနဲ့ ဖြစ်ပွားနေတဲ့ ပဋိပက္ခဟာ လက်နက်ကိုင်ပဋိပက္ခ အသွင်ကိုဆောင်ပြီး ပြည်တွင်းစစ်ကို ဦးတည်နေပါတယ်။ ဒါကြောင့် တိုင်းပြည်နဲ့ ပြည်သူတွေအတွက် အလွန်စိုးရိမ်စရာ ကောင်းပါတယ်။ နအဖအနေနဲ့ ငြိမ်းချမ်းရေးစယူခဲ့စဉ်တုန်းက မြန်မာနိုင်ငံမှာ ဘယ်ခေတ် ဘယ်အခါမှ မတည်ဆောက်နိုင်ခဲ့တဲ့ ငြိမ်းချမ်းရေးကို တည်ဆောက်နိုင်ခဲ့ပြီး လက်နက်ကိုင် ဘယ်ရွေ့ဘယ်မျှနဲ့ ငြိမ်းချမ်းရေးကို ရယူပြီး လက်တွဲဆောင်ရွက် နိုင်ခဲ့ပြီရယ်လို့ မိုးလုံးပြည့် ကြွားဝါခဲ့တဲ့ စကားတွေဟာ ထိုစဉ်ကတည်းက ကေအန်ယူ၊ ကေအန်ပီပီ၊ အက်စ်ယူအာအေ တို့နဲ့ တိုက်နေတဲ့ တိုက်ပွဲကြီး တိုက်ပွဲငယ်တွေရဲ့ အသံတွေက ပျက်ရယ်ပြုနေသလို ရှိခဲ့ပါတယ်။ မကြာသေးမီကာလမှာ ကိုးကန့်အဖွဲ့အစည်းနဲ့ ဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ လက်နက်ကိုင်ပဋိပက္ခဟာလည်း နအဖရဲ့ ကြွားလုံးတွေကို သရော်နေသလို ရှိနေပါတယ်။ အခုလည်းပဲ ငြိမ်းချမ်းရေးရယူထားပါပြီ၊ လက်တွဲဆောင်ရွက်နေပါပြီဆိုတဲ့ အဖွဲ့အစည်းများနဲ့ မပြေမလည်မှုကနေ စစ်ပြင်ဆင်မှုအထိ ဖြစ်ပေါ်နေတာတွေဟာ နအဖရဲ့ တချိန်က ကြွားလုံးတွေနဲ့ ပြဒါးတလမ်း သံတလမ်းလို ဖြစ်နေပါတယ်။
လက်တလောအခြေအနေမှာ နအဖအနေနဲ့ တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းတွေကို လက်နက်ဖြုတ်သိမ်းရေး၊ နယ်ခြားစောင့်တပ်အသွင်ပြောင်းရေးအတွက် တဖက်သတ် ဖိအားပေးကြိုးပမ်းနေပေမယ့် တိုင်းရင်းသား အဖွဲ့အစည်းများဘက်က ဒါကိုလက်မခံဘဲ ပြေလည်ရာပြေလည်ကြောင်း အကျိုးသင့်အကြောင်းသင့် တင်ပြဆွေးနွေးမှုတွေ ရှိခဲ့ပါတယ်။ ဒါတွေကိုလည်း နအဖ ဘက်က လက်ခံမယ့်သဘောမရှိဘဲ တဖက်သတ် ချမှတ်ထားတဲ့ လုပ်ငန်းစဉ်အတိုင်းသာ ဆောင်ရွက်သွားမယ့် သဘောရှိပါတယ်။ ဒီလိုသာဆိုရင် မြန်မာနိုင်ငံရဲ့အခြေအနေဟာ ဒေသအလိုက်ဖြစ်နေတဲ့ စစ်ပွဲတွေကနေ တပြည်လုံးအတိုင်းအတာနဲ့ ပြည်တွင်းစစ်မီး တောက်လောင်လာမယ့် သဘောရှိပါတယ်။ ဒါဟာ တိုင်းပြည်နဲ့ ပြည်သူတွေအတွက် အလွန်စိုးရိမ်စရာဖြစ်ပါတယ်။
တကယ်တော့ ဒီအဖွဲ့အစည်းများအနေနဲ့ နအဖရဲ့တောင်းဆိုချက်တွေကို မလိုက်လျောတာဟာ လက်နက်ကိုင်တိုက်ပွဲတွေကို ၀ါသနာထုံလို့၊ စစ်ကိုလိုလားလို့ မဟုတ်ကြပါဘူး။ တကယ်တမ်း ငြိမ်းချမ်းရေးကို လိုလားကြသူတွေဟာ ဒီတိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းများနဲ့ တိုင်းရင်းသားပြည်သူများသာ ဖြစ်ကြပါတယ်။ ဘာကြောင့်လဲဆိုရင် အနှစ် (၆၀) ကျော် ဖြစ်ပွားလာခဲ့တဲ့ ပြည်တွင်းစစ်ရဲ့အနိဋ္ဌာရုံတွေ ခါးသီးတဲ့ အတွေ့အကြုံတွေကို မျက်ဝါးထင်ထင် တွေ့ကြုံခံစားခဲ့ရပြီး ဖြစ်ပါတယ်။ ယခုတိုင်လည်းပဲ ကျေးရွာစွန့်ခွာ ထွက်ပြေးပြီးတော့ ခိုကိုးရာမဲ့ ဖြစ်နေကြရတဲ့ ဘ၀အတွေ့အကြုံတွေအရ စစ်ကို မလိုလားကြပါဘူး။ စစ်ကို မုန်းတီးကြပါတယ်။ ဒါကြောင့် ငြိမ်းချမ်းရေးကို အလိုလားဆုံးပုဂ္ဂိုလ်များဟာ တိုင်းရင်းသား ပြည်သူတွေနဲ့ တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းတွေပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် တိုင်းရင်းသားလူမျိုးများအရေး ပြည်နယ်အရေး ပြည်ထောင်စုအရေးအတွက် မလွဲသာမရှောင်သာ တိုက်ပွဲဝင် နေကြရတာသာ ဖြစ်ပါတယ်။ ငြိမ်းချမ်းရေးယူစဉ်ကလည်း ကြည်ကြည်ဖြူဖြူ လိုလိုလားလား ငြိမ်းချမ်းရေးအတွက် ကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်ခဲ့ကြပါတယ်။ ဒါဟာ အပစ်ရပ် တိုင်းရင်းသားအဖွဲ့အစည်းများရဲ့ ငြိမ်းချမ်းရေးယူစဉ်က သဘောထားအမှန်ပါ။ အပစ်အခတ်ရပ်စဲပြီးရင် တိုင်းရင်းသားများအရေးအတွက် ဆွေးနွေးညှိနှိုင်းဖြေရှင်းနိုင်လိမ့်မယ်လို့ ယုံကြည်ခဲ့ကြပါတယ်။
ဒါပေမယ့် နအဖ အာဏာပိုင်တွေက မလိမ့်တပတ် ဉာဏ်နီဉာဏ်နက်တွေနဲ့ နိုင်ငံရေးကိစ္စတွေ၊ တိုင်းရင်းသားအရေးတွေကို ညီလာခံမှာ ဆွေးနွေးပါဆိုပြီး ရွှန်းရွှန်းဝေအောင် အယုံသွင်းပြောကြားခဲ့ကြပါတယ်။ ဒါပေမယ့် အမျိုးသားညီလာခံကို တက်ရောက်ပြီး တိုင်းရင်းသားကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့တွေက တိုင်းရင်းသားလူမျိုးများအရေး ပြည်ထောင်စုအရေးတွေကို တင်ပြခဲ့တဲ့အခါမှာတော့ ဒီအကြောင်းအရာတွေနဲ့ ပတ်သက်လို့ အပြန်အလှန် ဆွေးနွေးခွင့်တောင်မရဘဲ မှတ်တမ်းတင်ရုံတင်ထားပါမယ်ဆိုပြီး ပယ်ချခဲ့တာကို ခံခဲ့ရပါတယ်။ ဒီလိုအလားတူ နအဖရဲ့ လိမ်ညာလှည့်ဖြားမှုတွေကို ငြိမ်းချမ်းရေးယူပြီး ကာလတလျှောက်မှာ အကြိမ်ကြိမ် ကြုံတွေ့ရလာဖန်များတော့ နအဖအပေါ်မှာ ယုံကြည်မှုမရှိသလို တိုင်းရင်းသားလူမျိုးများရဲ့ ရပိုင်ခွင့်အတွက်လည်း မည်သည့်အာမခံချက်မှ မရရှိသေးတာကို တွေ့မြင်လာရတယ်။ အထူးသဖြင့် နအဖက ရေးဆွဲပြီး အတင်းအကျပ် အတည်ပြုခဲ့တဲ့ ၂၀၀၈ ဖွဲ့စည်းအုပ်ချုပ်ပုံအခြေခံဥပဒေမှာလည်း တိုင်းရင်းသားလူမျိုးများရဲ့ ရပိုင်ခွင့်ကို လျစ်လျူရှုထားတဲ့အပြင် စစ်တပ်ကသာ ပြည်နယ်တွေနဲ့ တိုင်းရင်းသားဒေသတွေကို ထာဝရစိုးမိုးအုပ်ချုပ်မယ့် ဖွဲ့စည်းအုပ်ချုပ်ပုံ အခြေခံဥပဒေသာ ဖြစ်တယ်လို့ သိမြင်ထားကြတယ်။
ဒါကြောင့် တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းတွေဟာ နအဖ တောင်းဆိုနေတဲ့ လက်နက်ဖြုတ်သိမ်းရေး၊ နယ်ခြားစောင့်တပ်အသွင်ပြောင်းရေး ဆိုတာတွေကို လက်မခံကြတာဖြစ်ပါတယ်။ အထူးသဖြင့် နအဖအနေနဲ့ တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းများနဲ့ ငြိမ်းချမ်းရေးယူခဲ့တုန်းက အကြံအစည်များဟာလည်း ဘူးပေါ်သလိုပေါ် လာခဲ့ပါတယ်။ နအဖအနေနဲ့ တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့ ငြိမ်းချမ်းရေးယူပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာ ဒီအဖွဲ့အစည်းတွေကို စီးပွားရေးလုပ်ပိုင်ခွင့်တွေ အမျိုးမျိုးသော အခွင့်အရေးတွေနဲ့ မြူဆွယ်ဖြားယောင်းပြီး ဖျက်ဆီးဖို့ အကြံအစည်တွေ ပြီးတော့ ဒီအဖွဲ့အစည်းတွေကို သွေးခွဲပြီးတော့ အင်အားချိနဲ့အောင်လုပ်မယ့် အကြံအစည်တွေဟာ နောက်ဆုံးမှာတော့ ခြိမ်းခြောက်အနိုင်ကျင့်ပြီး လက်နက်ဖြုတ်သိမ်း သို့မဟုတ် တပ်မတော်လက်အောက်ကို သွတ်သွင်းပြီးတော့ တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်တော်လှန်ရေးတွေကို ချုပ်ငြိမ်းစေအောင် ကြံစည်လုပ်ဆောင်ခဲ့တာသာ ဖြစ်ပါတယ်။
ဒီလိုအကြံအစည်တွေကို မလိုက်လျောနိုင်တဲ့ တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းတွေကို နအဖအနေနဲ့ စစ်ရေးအရ အရေးယူဆောင်ရွက်မှာလား။ ဒီလိုသာဆိုရင် တိုင်းရင်းသားအဖွဲ့အစည်းများအနေနဲ့ မလွဲမရှောင်သာ ပြန်လည်ခုခံစစ်ကို ဆင်နွှဲရမှာဖြစ်ပါတယ်။ တိုင်းရင်းသားအဖွဲ့အစည်းတွေဟာ လက်နက်အင်အား၊ လူအင်အား မမျှတတဲ့ န၀တရဲ့တပ်တွေကို တိုက်ခိုက်ဖို့ ဆန္ဒမရှိကြပါဘူး။ တွေ့ဆုံဆွေးနွေးညှိနှိုင်းခြင်းဖြင့်သာ ပြဿနာတွေကို ဖြေရှင်းချင်ကြပါတယ်။ ဒါပေမယ့် နအဖက တိုက်ခိုက်လာမယ်ဆိုရင်လည်း ခုခံကြရမှာသာ ဖြစ်ပါတယ်။
ဒီနေရာမှာ အနှစ် (၆၀) ကျော်ဖြစ်လာတဲ့ ပြည်တွင်းစစ်အတွေ့အကြုံတွေအရ တိုင်းရင်းသားလက်နက် ကိုင်အဖွဲ့အစည်းတွေကို အမြစ်ပြတ်ချေမှုန်းဖို့ဆိုတာ မဖြစ်နိုင်ဘူးလို့ဘဲ သုံးသပ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ အကယ်၍ ပြည်တွင်းစစ်မီးသာ ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့် တောက်လာမယ်ဆိုရင်တော့ တိုင်းပြည်နဲ့ ပြည်သူတွေအတွက် အလွန်စိုးရိမ်စရာကောင်းပါတယ်။ ပြည်သူတွေအနေနဲ့ ပြည်တွင်းစစ်ရဲ့ ခါးသီးတဲ့ အတွေ့အကြုံတွေကို အနှစ် (၆၀) ကျော် ခံစားခဲ့ရပြီး ပြည်တွင်းစစ်ဒဏ်ကြောင့် သေကျေပျက်စီး ဆုံးရှုံးခဲ့ရတဲ့ အသက်အိုးအိမ်စည်းစိမ်တွေဟာ မရေတွက်နိုင်သလို တိုင်းပြည်အတွက် ဆုံးရှုံးမှုတွေလည်း ဖြစ်ပါတယ်။ နှစ်ဘက်တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေ ကျဆုံးသွားတာဟာလည်း နိုင်ငံသားတွေပဲဖြစ်ပါတယ်။ နှစ်ဘက်စလုံးက ၀ယ်ယူခဲ့ကြတဲ့ လက်နက်တွေ၊ အမြောက်ကြီးတွေ၊ ကျည်ဆန်တွေ၊ ဒုံးကျည်တွေ၊ ဗုံးဆန်တွေအတွက် ကုန်ကျတဲ့ငွေတွေဟာ တိုင်းပြည်ဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက်၊ ပြည်သူတွေရဲ့စားဝတ်နေရေးအတွက် ဖန်တီးရမယ့် တိုင်းပြည်ရဲ့ဘဏ္ဍာတော်တွေပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
ဒါ့ကြောင့် ပြည်တွင်းစစ်မီးသာ ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့် ဖြစ်ပွားလာမယ်ဆိုပါက နောက်ထပ်ပြည်သူတွေရဲ့ အသက်အိုးအိမ် စည်းစိမ်တွေ၊ တိုင်းပြည်ရဲ့ဘဏ္ဍာငွေတွေ ဘယ်၍ဘယ်မျှ ဆုံးရှုံးမယ်ဆိုတာ မခန့်မှန်းနိုင်သလို ပြည်သူတွေရဲ့ ဒုက္ခတွေဟာလည်း အတိုင်းအဆမဲ့ ရင်ဆိုင်ကြုံတွေ့ကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။ နအဖအနေနဲ့ကတော့ စစ်ပွဲကို အကြောင်းပြုပြီး စစ်တပ်တွေကို တိုးချဲ့လာနိုင်သလို တိုင်းပြည်ရဲ့ဘဏ္ဍာတွေကိုလည်း အမြောက်အမြား သုံးစွဲပြီးတော့ စစ်အာဏာရှင်စနစ် တည်မြဲရေးအတွက် ပြည်တွင်းစစ်ကို ဖန်တီးကောင်းဖန်တီးနိုင်ပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့် တိုင်းရင်းသားပြည်သူတရပ်လုံးအနေနဲ့ ပြည်တွင်းစစ်မဖြစ်ပွားအောင် အဘက်ဘက်က ၀ိုင်းဝန်းကြိုးစားကြဖို့လိုပါတယ်။ ။
“အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်၏ မတ်လ ၂၉ ရက်နေ့ အစည...